Itoobiya oo Erteria ku eedaysay in ay taageerto weerarada Al-shabaab ka soo abbaabusho Soomaaliya – Radio Daljir
Itoobiya oo Erteria ku eedaysay in ay taageerto weerarada Al-shabaab ka soo abbaabusho Soomaaliya
Nofeembar 7, 2013 2:35 b 0
Adis Ababa, November 7, 2013 – Wasaarada arrimaha debeda ee dalka Itoobiya ayaa ku celisay in ay heegan buuxa la geliyey ciidamada booliska iyo kuwa sirdoonka iyo xataa ciidamada xuduudaha ee dalkaas, markii la helay macluumaad muujinaya khatar Argagixiso.
Afhayeen u hadlay wasaarada arrimaha debeda ee Itoobiya oo la yiraahdo Dina Mufti, waxaa uu sheegay in Eretria ay hubaynayso isla markaasna taageero dhinac walba ah ku siinayo Al-shabaab in ay weeraro ka fuliyaan Itoobiya.
?ciidankeenna hadda waxay ku jiraan heegan, waxay diyaar u yihiin in ay ka hortagaan khatar kasta oo nagaga timaada dhinaca Argagixisada gobolka.? Afhayeen Dina Mufti.
Waxaa uu afhayeenku sheegay in Eretria ay tahay khatarta ugu wayn ee Itoobiya ku leedahay gobolka, Mufti ayaa xusay in Eretria hubayso cid walba oo ka soo horjeeda dowladda Itoobiya.
Xornimada Eretria ee dhamaadkii qarngii 20-aad kadib Dagaal wakhti dheer qaatay ayaa u dhexeeya labbada wadan.
?Itoobiya, Kenya iyo Uganda waxay iska kaashanayaan dagaalka ka dhanka ah Argagixisada, weliba ka hortaga weerarada la fuliyo xiliyo aan la ogayn.? Afhayeenka wasaarada arrimaha debeda ayaa sidaas ku sheegay qoraal lagu baahiyey warbaahinta dowladda Itoobiya.